Olee otú Ọkụ AVI ka DVD on Windows 10
> Resource> Windows> Olee Ọkụ AVI ka DVD na Windows 10
Dị nnọọ kwalite ka Windows 10 na-amaghị otú isure AVI ka DVD na ọhụrụ sistemụ? Echegbula. Ke ibuotikọ emi, m tumadi ịkọrọ a pụrụ ịdabere na ngwá-enyere gị aka ọkụ AVI ka DVD na Windows 10 effortlessly.
Nke ahụ bụ Wondershare DVD burner. Ọ bụ kpam kpam dakọtara na Windows 10 na-arụ ọrụ nke rụọ ọrụ nke ọma na usoro ihe ọhụrụ. Na ya, ị nwere ike ire DVD losslessly si gị AVI faịlụ, ọbụna ihe ọ bụla ọzọ na-ewu ewu format faịlụ dị ka WMV, FLV, mpg, MPEG, MKV, MP4, M4V, MOV, H.264, MTS / M2TS / TS / AVCHD wdg Ma usoro dị nnọọ mfe, nanị ole na ole clicks.
Tupu ọkụ AVI ka DVD, ị chọrọ nwụnye a AVI ka DVD Ntụgharị maka Windows 10 mbụ. Na oké ngwa bụ kpọmkwem dị ebe a. Dị nnọọ na-ya site na ịpị download njikọ n'okpuru na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 Ibu Ibu AVI videos ka AVI ka DVD burner maka Windows 10
Na-agba ọsọ AVI ka DVD burner maka Windows 10, wee pịa "Import" Ibu Ibu gị isi iyi AVI faịlụ. I nwekwara ike ịgbakwunye music faịlụ dị ka ndabere music ma ọ bụ .JPEG, PNG, .BMP photos ọ dị mkpa.
Ka ịmepụta ọzọ isi, dị nnọọ pịa "Tinye aha" button na mgbe ahụ gbanwee aha dị ka kwa gị mkpa. Na-emekarị, e nweghị ịgba banyere aha nọmba, kama ị ga-echetara faịlụ size egosi na ala (awawa mmanya).
2 Eme AVI vidiyo na Windows 10 (Nhọrọ)
AVI ka DVD burner maka Windows 10 na-enyekwa na-usoro edezi atụmatụ-enyere gị aka welie videos ala. Pịa pensụl na akara ngosi n'akụkụ ọ bụla video clip, ị ga-abịa na edit window. Ebe a, ị nwere ike bugharia 90 degrees, ewepụtụ si na-achọghị akụkụ, tinye watermark, kpatụ ìhè, iche, volumn, na ndị ọzọ.
3 Ọkụ AVI ka DVD na Windows 10
Ugbu a ị na okokụre niile nkwadebe arụ ọrụ, dị fanye a ide DVD diski n'ime gị DVD onye so dee, ma họrọ mmepụta mma. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ya gafere na-acha uhie uhie akara, ị nwere ike họrọ "kwesịrị ekwesị diski" ma ọ bụ dochie gị DVD na a elu ikike diski dị ka DVD-R 9.0G.
Ugbu a dị nnọọ pịa "Ọkụ" bọtịnụ mgbachapụ AVI ka DVD apa ọkụ converting na Windows 10. Ozugbo, ị pụrụ ịhụ a na-enwe ọganihu window. Mgbe AVI ka DVD ede zuru ezu, DVD diski ga idaputa-akpaghị aka. Ị nwere ike fanye ya kpọmkwem n'ime a nkịtị DVD ọkpụkpọ na-enwe na TV na n'ụlọ DVD ọkpụkpọ ekirikarị elu. E wezụga na-ere ọkụ AVI faịlụ ka DVD diski na Windows 10, ị nwekwara ike a usoro ike DVD nchekwa ma ọ bụ ISO oyiyi faịlụ n'ihi na mma ma ọ bụ mgbe e mesịrị na-ere ọkụ nkekọrịta ala.
Isi na: AVI ka DVD Ntụgharị Windows 10 na-enye ọtụtụ free DVD menus. Pịa NchNhr taabụ, na mgbe bulie ihe kwesịrị ekwesị otu maka gị DVD. I nwekwara ike ịchọ ọzọ DVD ndebiri site na ịpị green download akụ dị nnọọ n'akuku Template.
Free download AVI ka DVD burner maka Windows 10:
Olee otú Play AVI Files na TV (Samsung TV gụnyere)